Su'aal ku saabsan Fibromyalgia?
Author Topic: Su'aal ku saabsan Fibromyalgia? (Read 2958 times)
« on: March 14, 2012, 01:37:11 PM »
waan idin salaamay dhakhatiirta
waxaan u maleynayaa inuu i hayo xanuunka fibromyalgia markaa akhriyey calaamada cudurkan iyo astaamihiisa.
waxaan leeyahay calaamadahan ku xusun meesha intooda badan sida diiqada welwelka iyo xanuunada
waxaanuu xanuunkani ihayo mudo iminka ku dhaw ilaa sanad markaa waxaan idinka codsanayaa talaabada ugu fiican ee aan qaadi karo
iyo daawada saxda hadii ay tahay baadhitaano ama loo baahdo in aan dhakhtar laxidhiidho
Re: Su'aal ku saabsan Fibromyalgia?
« Reply #1 on: April 06, 2012, 05:54:01 PM »
Ma jiro baaritaan lagu ogaado xanuunka fibromyalgia, laakiin waxaa garan karo qof aqoon u leh cudurkaan ama ku taqasusay cudurrada ku dhaco lafaha iyo murqooyinka, qofkaasina waxaa loo yaqaanaa "Rheymatologist" waa takhtar ku taqasusay cilmigaas.
Haddii aad awood u leedahay in takhtarkaas aad hesho way fiicnaan lahayd maxaa yeelay waxaa jiro cudurro badan oo u eg fibromyalgia oo u baahan in laga sooco, waxaa looga sooci karaa in la sameeyo dhowr baaritaan oo lagu ogaado cudurrada kale.
Haddii cudurrada kale lagaa waayo, aadna leedahay astaamaha cudurka fibromyalgia, takhtarka daawo ayuu kuu qori doonaa.
Halkaan ka akhriso warbixin dhameestiran oo ku saabsan Fibromyalgia: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2543.0
Su'aal ku saabsan jirka dhexdiisa iiga socdo hawo guureyso?
Started by Maxamed1969Board Qaybta Su'aalaha
Views: 13370 August 13, 2010, 03:34:13 PM
Su'aal ku saabsan gooryaanka caloosha iyo wax yeelada uu ugeeysto qofka qabo?
Started by DeeriusBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 19969 October 27, 2012, 09:40:12 PM
Warbixin guud oo ku saabsan waxbarashada ee dalka masar:
Started by Dr.HabiibBoard I want to Study Medicine
Views: 17252 September 04, 2011, 04:19:01 AM
Su'aal ku saabsan xubinta taranka raga iyo yiridka?
Started by AadaarBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 15510 October 02, 2010, 08:11:06 AM
Su'aalo ku saabsan siigeysiga iyo finanka wajiga?
Started by SeidBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 41847 February 24, 2011, 10:54:29 AM